छाडा गीतले नेपाली संस्कृति बिगारेको छ
साँच्चै अहिलेको नेपाली लोकदोहोरीको अवस्थालाई नजिकबाट हेर्ने हो भने हामीले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ कि नेपाली लोकदोहोरी गीत अहिले लोकफोहोरी गीतको सूचीमा दर्जा हुन पुगेको अवस्था छ । यो अवस्थाको जानकार नेपाली लोकगीत दोहोरी गीतका गायक, सर्जक तथा शुभचिन्तक सबै छन् । कोही नजानेर नेपाली लोकदोहोरी बिगारेका छन् भने कसैले यहाँ रातारात आफू हिट बन्ने दिवा सपना देखेर नेपाली लोकसंस्कृति बिगार्नमा तल्लिन बनेका छन् । तर कोही कलाकारहरु यस क्षेत्रको संरक्षण गर्नमा व्यस्त रहेका छन् तर त्यस्ता कलाकाहरु सबै चर्चाबाट बाहिर रहन्छन् । त्यसमध्येका एक हुन् लोकदोहोरी गायक तथा संगीतकार विरही कार्की । उनै सुमधुर स्वरका धनी गायक हुन्– विरही कार्कीसँग जनमञ्च साप्ताहिकका रंगमञ्च स्तम्भकार रामप्रसाद पाठकले गरेको समसामयिक वार्तालाप :
अहिले चाडबाडको बेला छ । दशैंमा गाउँतिर गएर त्यतातिर भएका कार्यक्रममा सरिक भएर आइयो । अहिले तिहारको रमझम छ । त्यसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमा सहभागी हुन व्यस्त रहेको छु भनौं ।
तपाईंको बाल्यकाल कहाँ बित्यो अलिकति बताइदिनुस् न ?
म गोर्खाको पालुङटार नगरपालिका लिगलिगकोटमा फूलमाया कार्कीको कोखबाट जन्मेको हुँ । र, मेरो बाल्यकाल गोर्खामै बित्यो भनौं ।
कलाकारितामा कहिलेदेखि लाग्नुभयो ?
वि.सं. २०५३ पुस २७ गते रेडियो नेपालबाट सरर मिनी बसैमा भन्ने लोकगीत गाएर स्वर परीक्षा पास गरेबाट औपचारिक रुपमा यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ ।
तपाईंले त एकल साँझसमेत गरिसक्नुभएको छ, अब फेरि अर्को एकल साँझ गर्ने तयारी छ कि ?
अहिले तत्काल त छैन तर अर्को वर्षतिर भने गर्ने योजना छ भनौं ।
तपाईंले फूलमाया कार्की सामाजिक संस्था पनि सञ्चालन गरिरहनुभएको छ, कस्तो छ यसको हाल खबर ?
राम्रै छ भनौं । मेरो आमाको नामबाट सञ्चालनमा ल्याएको यो संस्थाले गोर्खा र चितवनमा गरिब तथा पिछडिएका बच्चाहरु पढाइरहेको छ । यस्तै अरु पनि सामाजिक कार्यमा सक्रिय छ यो फाउण्डेशन ।
अहिलेसम्म कति गीत गाउनुभयो ?
अहिलेसम्म दुई सयभन्दा बढी गीत गाएको छु भने सयभन्दा बढी मैले संकलन गरेका गीत छन् । मेरा एकल र सामूहिक गरेर सत्ताइसवटा रहेका छन् ।
तपाईंले गाएका चर्चित गीतहरुमध्ये केहीको नाम पनि बताइदिनुहोस् न ?
सुनखानीमा सुन, आमा तिम्ले लगाएको चुरा फुट्दाखेरि, आमा भाग १, २, ३, जुनकिरी, मायालु हजारलगायत छन् ।
अब बजारमा आउने कुनै गीत छन् कि ?
हजुर अहिले मेरो डाँडैमा बिजुली आयो भन्ने गीत बजारमा आइरहेको छ । र, अब आउने तयारीमा आमा भाग चार र लोकदोहोरी संग्रह आँखै नलाउने पनि ल्याउने तयारीमा छु ।
अहिलेको नेपाली लोकदोहोरी गीतलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
वास्तवमा अहिलेको नेपाली लोकदोहोरी गीतको बारेमा भन्ने हो भने त एकदमै खराब परिस्थिति सिर्जना भएको छ । मै हुँ भन्ने गायकगायिकाहरु पनि नेपाली लोकदोहोरीको ठेटपन बिगार्नमा तल्लिन रहेका छन् र तिनै फेरि नेपाली लोकदोहोरी गीतको संरक्षण गर्ने अभियानमा दौडिएको अभिनय गरिरहेका हुन्छन् । यहाँ छाडा गीत गाएर कहीँ नेपाली लोकसंस्कृतिको संरक्षण हुन्छ ? छाडा गीतले नै नेपाली संस्कृति बिगारेको छ ।
सर्वप्रथम त ढिलै भए पनि विजया दशमी र दीपावलीको शुभ अवसरमा नेपाली गीतसंगीत शुभचिन्तकहरुमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना प्रदान गर्न चाहन्छु र मेरा मनका छटपटीलाई यस साप्ताहिकमार्फत अभिव्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा जनमञ्च साप्ताहिक र तपाईं गायक तथा पत्रकार मित्र रामप्रसाद पाठकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु ।